RW Rooble oo kulamo gaargaar ah ka wada Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo kulamo gaargaar ah ka wada Muqdisho
Wuxuu la kulmay madaxda saddex maamul iyo duqa Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa caawa fiidkii kula kulma Decale hotel oo Garoonka ku dhex-yaalla saddex Madaxweyne maamul iyo duqa Muqdisho.
Waxaa ka qeybgalay kulankan wadatashi hooseedka ah Qoor-Qoor, Lafta-Gareen, Axmed Madoobe iyo Cumar Filish, iyadoo la filayo Rooble inuu sameeyo kulamo gaargaar ah kahor inta uusan furmin shirka Sabtida.
Waxaan wali soo gaarin magaaladda Madaxweynaha Puntland iyo dhisiiga HirShabeelle Cali Guudlaawe oo arrimo gaar ah ku maqan, waxaana la filayaa in berri ay kusoo biiraan saaxiibadooda kale.
Shirka waxaa la filayaa in furitaankiisa ka qeybgalaan Musharixiinta Mucaaradka, bulshadda rayidka iyo marti sharaf kale, iyadoo qeybaha dambe ee go'aan gaarista isagu soo hari doonaan madaxda shanta Maamul oo lagu daray Duqa Muqdisho iyo Rooble.